INKOKHELI YENKCUKACHA YETYhubhu YE-SQUARE ECHINA
INKOKELI YOSHISHINO YOSHISHINO YASETSHINA
IINKQUBO ZOLUNTU KULUNTU
SQUARE & ityhubhu YENTSIMBI EQHELEKILEYO
Umbhobho wesinyithi owenziwe ngombane
IPHEPHA LESIMISO ESIKHETHEKILEYO
SITUBA SENTSIMBI ESINGABONAKALI
I-LINE PIPE kunye ne-OCTG
ISIQINISEKISO SOKWENZIWA KWE-RAW
Isiqinisekiso sezinto ezibonakalayo
100% ukuthobela imigangatho
Ukuphendula ngokukhawuleza kwimizuzu engama-30
YAKHA IBANDLA LOKUGQIBELA LAKUDALA
Tianjin Yuantai Derun Pipe Manufacturing Group Co., Ltd., esekwe ngo-Matshi 2002 kwaye zivela Tianjin Yuantai Industrial and Trading Co., Ltd, ibekwe kwindawo enkulu imibhobho-lemveliso isiseko-Daqiuzhuang zone mveliso e Jinghai Tianjin ekufutshane i-China National Highway 104 kunye ne-205 kwaye ikwi-40 km kuphela kude neTianjin Xingang Port. Indawo entle ekuma kuyo ixhasa ukulungela ukuthuthwa ngaphakathi nangaphandle.
Abavelisi abaphezulu base China
5 yezigidi zeetoni
Amandla emveliso ngaphezu kweetoni 5 million
Iqela lethu livelisa iintlobo ezahlukeneyo zombhobho wensimbi, uluhlu olubanzi lwezicelo, ukuqinisekiswa komgangatho, umgangatho wokuqala
2 intshi umthengisi yesikwere zokutyubhisha isikwere
Ubungakanani beTyhubhu eMnyama yeCarbon Square
I-ASTM A36 ityhubhu eshushu eqengqelekileyo yentsimbi yesikwere
Umbala omnyama we-MS-Square-Pipe-Ubunzima-3-6mm
Icandelo le-ERW elingenanto ukusuka e-China
Amacandelo oMngxunya wolwakhiwo
I-Iron MS ngeenxa zonke Umbhobho oVuthayo
Iminyaka engama-20 yamava okuvelisa umbhobho wentsimbi
Omnye wabaqulunqi bomgangatho kazwelonke
Esona sikwere sikhulu kunye nexande elenza ishishini lokuvelisa ityhubhu
Ukongeza kwikomkhulu eTianjin, zininzi iinkxaso-mali kunye namasebe eTangshan nakwezinye iindawo.
ICANDELO LEYUANTAIDERUN TANGSHAN
IYUANTAIDERUN NO.4 IFEKITI
Ifektri ye-YUANTAIDERUN NO.3
ICANDELO LOSHISHINO LWENYUANTAI NERHWEBO
YUANTAI DERUN GROUP KWANDLUNKULU UKWAKHA
IHong Kong Zhuhai Macao Bridge yibhulorho kunye neprojekthi yetonela edibanisa iHong Kong, iZhuhai neMacao e China. Ime kwindawo yaseLingdingyang yolwandle kwiPearl River Estuary kwiPhondo laseGuangdong. Licandelo lesangqa elisemazantsi lendlela yokuhambisa umsesane kwingingqi yePearl River Delta.
Ibala leNyoni leNyoni
Ibala lemidlalo lesizwe (Intaka yeNtshontsho) imi kumazantsi ombindi weBeijing Olimpiki. Yeyona nkundla iphambili yeMidlalo yeOlimpiki yaseBeijing ngo-2008. Ibandakanya indawo yeehektare ezingama-20.4 kwaye inokuhlalisa ababukeli abangama-91000. Emva kweMidlalo yeOlimpiki, iye yaba sisakhiwo semidlalo esibalulekileyo kunye nelifa lemveli leOlimpiki eBeijing.
IZiko lokuDada leSizwe, elikwabizwa ngokuba yi "Water Cube" kunye ne "ice cube", ikwiBeijing Olimpiki. Yeyona natatorium iphambili eyakhiwe yiBeijing kwimidlalo yeOlimpiki yeHlabathi ka-2008 kwaye yenye yezona zakhiwo zibalulekileyo zemidlalo yeOlimpiki yaseBeijing ngo-2008.
Isikhululo senqwelomoya iHK
Isikhululo senqwelomoya saseHong Kong, esiseChek Lap Kok, kwisiqithi saseLantau, eHong Kong, China, iikhilomitha ezingama-34 ukusuka kwindawo yedolophu, sisikhululo seenqwelomoya i-4f. Esinye sezikhululo zeenqwelomoya ezixakekileyo emhlabeni. Ngaphezulu kweenqwelo moya ze-100 ezisebenza apha, zikwindawo yesihlanu kumthamo wabakhweli wezithuthi kunye neyokuqala kumthamo wempahla kangangeminyaka eli-18 ilandelelana
I-Grand Grand Theatre yase China yenye yeendawo ezintsha "ezilishumi elinesithandathu zaseBeijing". Ime kwintshona yeTiananmen Square kunye nentshona ye-Great Hall yabantu embindini weBeijing. Yenziwe sisakhiwo esiphambili, ipaseji yangaphantsi kwamanzi, indawo yokupaka ephantsi komhlaba, ichibi elenzelweyo kunye nendawo eluhlaza emantla nasemazantsi.
Eyakhelwe ngaphezulu kwe-11 yezigidi zeemitha zesikwere somhlaba okumgangatho ophezulu, i-villa yaseDubai ineendawo ezahlukeneyo zokuma komhlaba kunye negadi, iindledlana ezijikelezayo kunye neendawo zoluntu ezinkulu. Ukuvuselelwa kwentliziyo yesixeko, iibhloko zedolophu yaseDubai ziyilelwe ngokufanelekileyo ukuba zijikeleze ikhosi yegalufa ye-18 hole
Isikhululo senqwelomoya saseKuwait sisikhululo seenqwelomoya esiseFarwaniya, Kuwait, i-15.5 km (i-9.6 yeekhilomitha) kumazantsi eSixeko saseKuwait, esigubungela ummandla weekhilomitha ezingama-37.7 zeekhilomitha (i-14.6 yeekhilomitha). Liziko leenqwelo moya zeAl Jazeera kunye neKuwait.
Inqaba yaseBeijing CITIC, ekwabizwa ngokuba yiZhongguo Zun, sisakhiwo kwikomkhulu leqela lase China CITIC. Ime kwi-block z15, eyona ndawo iphambili yesithili seshishini. Ngokuphakama okupheleleyo kweemitha ezingama-528, imigangatho ye-108 ngaphezulu komhlaba kunye ne-7 imigangatho phantsi komhlaba, inokuhlalisa abantu abayi-12000 ukuba basebenze, nendawo iyonke yokwakha yeemitha zesikwere ezingama-437000. Inkangeleko yoyilo yenzelwe ukuxelisa isitya sakudala sakwa "Zun". Ngaphakathi, kukho ilifti yokuqala yokuphakama komhlaba enobude obungaphezulu kweemitha ezingama-500, ethi ikalwe njenge "Izakhiwo ezilishumi eziphambili zase China".
UKWAKHIWA KWE-GOOGLE SINGAPORE
Eli iya kuba liziko ledatha lesithathu lobuchwephesha eSingapore kwaye liya kubekwa eJurong West kanye ezantsi kwendlela kwezinye izakhiwo zalo ezibini.
I-Dubai Hills Estate yenye yezona zinto zintsha zibukekayo zaseDubai. Ime phakathi kweendlela ezimbini eziphambili ze-Al Khail kunye ne-Mohammed Bin Zayed Road, i-Dubai Hills Estate yindawo ebanzi yokuhlala kunye nendlela yokuphila equka iivillas, amagumbi asezantsi kunye nezindlu zasedolophini. Sisigaba sokuqala kwiprojekthi enkulu yeSixeko sase-Mohammed Bin Rashid, ethe yazuza ngokufanelekileyo imonitha 'yesixeko ngaphakathi kwesixeko' ngenxa yobubanzi bophuhliso.
EYIPUTA CAIRO CBD
Ikomkhulu elitsha lolawulo laseYiputa likwi-45km kwimpuma yeCairo kwindlela eya kwizibuko lesiXeko saseSuez. Le projekthi kulindeleke ukuba ibonelele ngamawaka emisebenzi kwaye ikhuthaze uqoqosho. Xa igqityiwe ikomkhulu elitsha kulindeleke ukuba ihlalise abantu abazizigidi ezi-5 abasombulula umba wokuxinana okungapheliyo kwikomkhulu langoku iCairo. Apha ngezantsi kukho ixesha leprojekthi yolawulo entsha yaseYiphutha kwaye konke okufuneka ukwazi malunga neprojekthi ukusuka ekuqaleni ukuya kulo mhla.
EYIPUTA INDLU ELUHLAZA
Iprojekthi enkulu yezindlu zokugcina izityalo ephunyezwe ngurhulumente wase-Egypt yenza umtsi osemgangathweni kwimbali yezolimo kweli lizwe njengoko iza kudlala indima enkulu ekufezekiseni ukhuseleko lokutya kwelona lizwe linabantu abaninzi base-Arab, iingcali zase-Egypt zatsho.
Ngeteknoloji eyomeleleyo, uphando kunye neziko lophuhliso
Iintsuku ezingama-90 zoQinisekiso loMgangatho emva kokufika kweempahla
Iminyaka engama-20 yamava okwenziwa kombhobho omkhulu wentsimbi
Siza kukufumanela ikowuti ekhawulezileyo yasimahla kwaye ucwangcise umsebenzi wakho ngosuku nangelona xesha lilungele wena.
Bhalisela iincwadana zethu ukuze uhlale usesikhathini kunye nokwenyusa, izaphulelo, ukuthengisa kunye nezibonelelo ezizodwa.
Malunga us News Iinkcukacha FAQ Project Isaziso Privacy